Teknolojiyad kuleyliyaha cusub oo loogu talagalay qeybta dambe
Waxaa lagu shubay xalka boodhka la cusbooneysiiyey, soosaarka uumigu si gooni ah ayuu u kordhayaa. Malaayiin daloolo cabir micro ah oo ku jira gariiradda dhoobada ayaa dhaliya uumi nadiifsan oo nadiif ah, oo keena dhadhan weyn iyo khibrad uus ubax aan caadi ahayn.
Tiknoolajiyadda Balance Leakproof Balance Dynamic
Ka kooban taxane ah xalal-caddayn-daadasho, Dynamic Balance Leak-proof Technology ayaa awood u leh inay hoos u dhigto heerka daadashada illaa 98%, marka la barbar dhigo jiifka caadiga ah.
Bowel-qaabeeya FEELM Coil, Qaabdhismeedka Anti-uumiga, U-qaabeynta Hawada Hawada, Saddex marinnada Hawada iyo Qaabdhismeedka Maze ayaa qayb ka ah xalka. Tikniyoolajiyadda Dheelitirka Dheelitirka ee Dynamic Balaak Leak-proof waxay qaadataa xalal kala duwan iyadoo loo eegayo qeybaha kala duwan, ujeedadeeduna tahay in hoos loo dhigo heerka baxsiga si loo ballaariyo.
Dhibic kasta oo E-dareere ah ayaa uumi ku jirta walxaha aerosol ee ka yar 1μm, taasoo si weyn u wanaajinaysa waxtarka gaarsiinta nikotiinka.
Qaybaha Aerosol ee ka yar 1μm, xitaa uumiga jilicsan ayaa keena dhadhan saafi ah oo daran
Qaybo badan oo aerosol ah, uumiga ayaa u daran laakiin u sinnayn natiijooyinka dhadhanka dhegta
Khibrad uumis qaawan oo joogto ah illaa inta u dambeysa
Joogto daciif ah, waayo-aragnimo uumiga ayaa si tartiib tartiib ah u yaraada
Ku qanacsanaanta weyn, waxtarka gaarsiinta nikotiinka ayaa kordhay 87.58%
Bixinta nikotiinka oo aan ku filnayn ayaa keenta qanacsanaan hoose
Isku mid ahaanta heerkulka badan, dhadhamin la'aan
Kuleylka aan dheellitirneyn wuxuu keenaa garaac joogto ah oo joogto ah
Mashiinka dhoobada u eg ee weelka loo yaqaan 'Bowl-shaped' iyo hawo-qabasho wanaagsan ayaa si weyn u yareeya heerka baxsiga
Qaab dhismeedka dabacsan si adag uma xiri karo E-dareeraha, heerka baxsiga badan
Kala qaybsanaan lahayn, aad u deggan
Buuq iyo Dildilaac dhawaaqa, halis sare
Soosaarida otomaatiga ah iyo shuruudaha kormeerka caalamiga ah waxay dammaanad qaadayaan tayo sare
Wax soo saarka gacanta ee dhaqameedku wuxuu keenaa tayo aan degganeyn
DIB U EEGID MEDIA
“Tayo dhisme oo weyn, ugu saxsan sigaarka ilaa maanta iyo barbaro aad u siman. FEELM si cad ayey halkan ugu leedahay meel adag waana rajeynayaa codsiyada mustaqbalka ee teknolojiyadda. ”
“Feel FEELM wuxuu si wanaagsan u shaqeeyaa. Dhadhanku runtii waa nadiif, si raaxo leh ayuu u diiran yahay, dhuunta dhuunta ayaa adag. Ma jirin wax daadanaya, candhuuf, ama wax soo barar haba yaraatee! Sidoo kale waa vape aad u aamusan. ”
“FEELM Pod waxay bixisaa dhammeystir wanaagsan, tayo cajiib ah, vape waxtar leh oo qaab isku kooban ah. Shaki la'aan waa xulasho aad u fiican in la bilaabo sigaarka elektarooniga ah. ”
Kuwaas oo ah geesaha jeexjeexan waxay si cad u yihiin xoogga gadaal ka riixaya vape dhab ah oo dhalaalaya, vape-ka halka dhinaca qabow ee diirran, weli waa mid aad u siman oo aad u xiiso badan. ”
COIL KINGS: atomeriyaha cusub ee FEELM ee ka socda SMOORE wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyad filim diirran oo bir ah oo casri ah si loo hagaajiyo khibradda uumiga uumiga.
E Sigaarka Uumiga Liibiya, Newport E Sigaar, Epen, Sigaar kuleylka, Sigaar Cabbida, E Xidhmada Sigaarka Bacaha,